Imilenze emininzi Apex kugula
I-Apex Legends akufuneki ibe "ngumdlalo" lowo kuwe, ngakumbi xa sele ufumene ukufikelela kwi-Apex Legends Multi-Legit Hack.
Ngaba ujonge ukuvavanya izinto? Ukuthenga ukufikelela kwi-1-Day kwi-Apex Legends Multi-Legit Cheat yethu!
Uyayazi into oyifunayo njengoMsebenzisi weGamepron- thenga imveliso yeeveki ezi-1 namhlanje!
Ukuqhekeza ixesha elide ngokuthenga ngokwakho isitshixo semveliso kwi-1-yeNyanga yokufikelela!
Isakhono sokuqhekeza zombini ngokufihlakeleyo nangokufanelekileyo sifezekiswa ngokulula xa usebenza ne-GamePron, kwaye lowo ngumnqophiso we-Apex Legends Multi-Legit Hack.
Apex Legends Multi-Legit kugula ulwazi
Elinye isihloko esidumileyo sedabi siphakanyisiwe! I-Apex Legends Hacks ibifunwa kakhulu okwethutyana ngoku, yiyo loo nto iGamepron inikezele ixesha elininzi kubo. Sinezona mpawu zibonakalayo kwi-Apex Legends hack (ukuza kuthi ga ngoku!), Zonke zikhuselekile kwaye azifunyanwa. Ukuba ukhe wafuna konke-in-nye Apex Legends kugula ezinokusetyenziswa ngaphandle kokukhathazeka, ufumene indawo elungileyo. Ayisiyiyo rhoqo ukuba ufumane i-Apex Legends Cheat eyayenziwe ngomgangatho njengeyona nto iphambili.
Ngeempawu ezingakumbi kunangaphambili. Esi sisiqalo nje xa kufikwa kwiimpawu ezibandakanyiweyo ngaphakathi kweeNqaku ze-Apex zeMigangatho yeMilenze emininzi!
Ulwazi lotshaba (Igama, imivalo yezeMpilo)
Into ye-ESP enezihluzi kunye nomgama
Umbala otshintsha iphalethi
Gcina / layisha ukucwangciswa kwangaphambili kokongezwa
Ukusasazeka (ukubanjwa komdlalo)
Malunga ne-Apex Legends Multi-Legit
Ukukopa ngokwako kulula kakhulu ukusebenzisa kwaye kulula nokusebenzisa. I-Gamepron yaziwa ngokugcina izinto zilula, njengoko sikholelwa ukuba yeyona ndlela yokujongana nokugenca. Njengokukhohlisa ngaphakathi, kusenokufuneka ukhubaze ukukhuselwa ekuthinteleni ukukopela ngokwako; Ngamanye amaxesha inkqubo yakho yokukhusela inokufaka iflegi yethu njengengxaki. Obu buqhetseba buza kuxhotyiswa nge-HWID spoofer yabo bonke abasebenzisi bethu be-HWID abavaliweyo, kwaye ungadlala nakwisisombululo esipheleleyo! Khange sisike naziphi na iimbombo xa kufikwa ekubekeni le Apex Legends Cheat kunye, kwaye uya kuba nakho ukuzibona ngokwakho.
Kutheni usebenzisa i-Apex Legends Multi-Legit ngaphezulu kwabanye ababoneleli?
Uhlala unoxanduva lokusetyenziswa kwehacks zakho, ke xa usenza ngokungakhathali kwaye uvaliwe awunakucinga ukuba kutheni kusenzekile. Senza ukuba sikhuseleke kangangoko sinako ukusebenzisa ii-Apex Legends Hacks apha kwi-Gamepron-sinikezela ngokukhohlisa okungafumanekiyo okunika amanqaku amaninzi amangalisayo. Ukuba awufuni ukuthatha ithuba lokuvalwa, ukubheja kwakho kukuthenga ii cheats zakho kumboneleli onokuthenjwa njenge Gamepron. Ngaba ufuna ukwazi ukuba kunjani ukuphumelela uninzi lwemidlalo ye-Apex Legends? Ewe, ukusebenzisa Gamepron kunokwenza ukuba kwenzeke!
Akunyanzelekanga ukuba ukhathazeke malunga nescreen esixineneyo okanye nokuba kukunqongophala kwezinto onokukhetha kuzo ngeGamepron, sithathe yonke into ngaphambi kokubeka i-Apex Legends Multi-Legit Hack. Imenyu yomdlalo ongaphakathi komdlalo inomdla kwaye iphume endleleni, ikuvumela ukuba wenze ngokhetho ukhetho lwakho ngaphandle kokuphulukana nokugxila. Thatha ulawulo lwamava akho okudlala kwaye uzenzele ii-Apex Legends Cheat ukuze zilungele iimfuno zakho! Phantse onke amanqaku akhoyo kwi-Apex Legends Hack anokuqwalaselwa kusetyenziswa imenyu yomdlalo weqonga, ke kubalulekile ukuba uqwalasele ngaphambi kokuthenga isitshixo semveliso. Ukukopela ngendlela elungileyo!
A2. Ewe obu buqhetseba bubungqina bomjelo, kwaye abuyi kubonakala kubabukeli.
A6. I-Multi-Legit isebenza njengokukopela kwangaphandle, okuthetha ukuba kufuneka usebenze umdlalo kwimowudi engenamda kwaye akukho ziscreen zimbini zinokusetyenziswa.
Kutheni uzikhathaza ngokulungisa enye indlela? Le yenye yezona zinto ziphambili ze-Apex Legends cheats ezikhoyo kwiwebhu ngoku, kwaye inyanzelekile ukuba ikhokele abasebenzisi bethu ekuphumeleleni. Ungazikhathazi ngezinye izixhobo kwaye ufumane ukufikelela namhlanje!
Fumana eyona mpango ilungileyo kwaye ulawule usebenzisa i-GamePron!
Ilindelwe Lawula kunye ne-Apex Multi-Legit Hack yethu?